भारतबाट फर्किएका नेपाली भन्छन् - 'चोर बाटो नेपाल पठाइदिने भन्दै प्रहरीले बाटैपिच्छे पैसा खाए'
भारतबाट फर्किएका नेपाली भन्छन् - 'चोर बाटो नेपाल पठाइदिने भन्दै प्रहरीले बाटैपिच्छे पैसा खाए' 'सरकार ! भारतमा नेपाली चेलीबेटी असुरक्षित भए, छिटो उद्धार गर'
रमेश भारती काठमाडाैं, ८ जेठ
भोजपुरका दिनेश राई भारतको पञ्जावबाट २ महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा बसेका थिए । उनलाई भारतीय प्रहरीले ४० दिनभित्र २ ठाउँ क्वारेन्टाइन राखियो । भारतमा पानी मात्र खाएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाे दिनेश बताउँछन् ।
क्वारेन्टाइनबाट निस्किएर हिँडेपछि भारतीय प्रहरीले चोर बाटो देखाउँदै पैसा लिएको दिनेशको भनाइ छ । क्वारेन्टाइनबाट निस्किएपछि भारतीय प्रहरीले चोर बाटो देखाएबापत प्रतिव्यक्ति ९ सय भारु लिएको उनले बताए ।
‘बनारसमा हामी ४० जनालाई २ वटा कोठामा क्वारेन्टाइन बनाएर राखिएको थियो । क्वारेन्टाइनमा सामान्य सुत्ने ठाउँ थियो । खानाको त कुरा नगरौँ । कस्तो खाना थियो, सम्झिँदा नि भोकै हराउँछ । गर्मी उस्तै, एउटा फयानसमेत थिए’ उनले भने ‘४० दिनपछि क्वारेन्टाइनबाट हामी ४० जनालाई विदा दियो । त्यसपछि नेपाल आउन बाटो खोज्यौँ । भारतीय प्रहरीले नै पैसा लिएर सिलगुडीसम्म आउने चोर बाटो देखायो ।’
दिनेश भारतको पञ्जावमा एउटा मोबाइल सप्लाई कम्पनीमा काम गर्दै आएका थिए । कोरोना संक्रमण बढन थालेपछि साहुले कम्पनी बन्द गरेर उसको घर केरला फर्कियो । त्यसपछि बाध्य भए आफू नेपाल फर्किएको उनको भनाइ छ । दिनेशसहित ५५ जना नेपाल फर्किएका थिए ।
यस्तै, भारतको गोवामा क्वारेन्टाइनमा बसेर नेपालमा आएका विक्रम मगरको समस्या दिनेशका जस्तै छ । झापाका मगर गोवाको १ होटलमा सुरक्षा गार्डको काम गर्दै आएका थिए ।
‘भारतको गोवामा सुरक्षागार्डको काम गर्दै आएको थिएँ । साहुले कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न थालेपछि घर जाऊ भनेर ५० हजार भारु दियो । कसरी जाने हो, त्यो तिम्रो काम हो भनेर कोठाबाट निकाल्यो,’ उनले भने, ‘गोवाबाट तरकारी बोक्ने गाडीमा बानरससम्म ३५ जना आयौँ । गोवामा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर आएका हामीलाई पुनः बनारसमा पनि क्वारेन्टाइनमा राखियो । बनारसमा क्वारेन्टाइनमा राखेपछि त्यहाँबाट बिदा भएर पानी ट्याङकीसम्म आयौँ ।’
गोजीमा भात खाने पैसा नभएका कति जना साथीसँग भारतीय प्रहरीले चोर बाटो देखाउँदै बाटैपच्छिे पैसा लिएको मगरले जानकारी दिए । भारतमा क्वारेन्टाइनमा बस्दा राम्रो खान नपाएको उनी गुनासो गर्छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्दा कुहिएको चामल, दाल, सड्न लागेको तरकारी र म्याद सकिएको बिस्टुकसँग दूध पाउडर खुवाएको उनीहरूले बताएका छन् ।
क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आएका भारतीय नागरिकले 'खान नपाएर आएकाले यस्तै दुःख भोग्नुपर्छ' भनेर गाली गरेको उनीहरूको भनाइ छ । भारतका विभिन्न स्थानबाट झापाको काँकडभिट्टा नाकामा अलपत्र २ सय ५ जना उद्धार गरेर बिर्तामोड क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
भारतदेखि नेपाल आउन ५७ दिन
बनारसमा हजारौँ नेपाली रोजगारीसँगै सामान्य चिया पसल गर्दै आएको इलामका विक्रम क्षत्री बताउँछन् । बनारस हुँदै धेरै नेपाली भारतको चेञ्नईसम्म काम गर्ने जाने गरेका छन् । यसरी काम गर्ने धेरै नेपाली होटल, सुरक्षागार्ड र घरमा काम गर्छन् । नेपालबाट बानरससम्म पुग्ने रेलमा २ दिन र रिजर्भ गाडीमा ३ दिन लाग्ने गरेको क्षत्रीले जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरसका कारण भारतबाट नेपाल आउन ६४ दिन लागेको क्षत्रीले अनुभव सुनाए । ‘भारतको गोवा र बनारसमा करिब १५ हजार नेपाली स्वदेश फर्कन सरकारको बाटो कुरिरहेका छन् । भारतमा अलपत्र परेका कतिपय महिला गर्भवती र दूधे बालक बोकेर बाटोमा बसेका छन्,’ उनले भने, ‘भारतमा अलपत्र परेका नागरिकलाई भारतीय प्रहरी र स्थानीयले धेरै दुःख दिइरहेका छन् । केही भन्यो भने प्रहरीले पैसा दिन्छस् कि थुनौँ भनेर धम्काउछन् । स्थानीयले बस्ने मन छैन कि क्या हो भनेर थर्काउँछन् ।’
भारतमा अलपत्र नेपाली युवती र महिला बलात्कृत हुने धेरै जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । उनीहरूलाई मौका पाए भारतीय प्रहरी र ट्रकका डाइभरबाटै बलात्कृत हुन सक्ने भन्दै छिटो सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने क्षत्रीले बताए । भारतका विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र परेका महिला धेरै असुरक्षित रहेको भन्दै उनीहरूका विषयमा सरकार गम्भीर भएर उद्धार गर्नुपर्ने उनीको भनाइ छ ।
भारतको दिल्ली मुम्बई, पुने, गोवा, बनारस, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, केरला, छत्तिसगढ, राजस्थान, पञ्जाव, उत्तराखण्ड, हरियाणा, हिमाञ्चल, जम्मुकश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु र पश्चिम बंगालमा धेरै नेपाली अलपत्र अवस्था बसेको उनीहरूको भनाइ छ । हल्थ मिशन नेपालका अनुसार भारतमा नेपाल फर्किने प्रतीक्षामा २ लाखभन्दा धेरै नेपाली रहेका छन् । यी क्षेत्रमा अलपत्र अवस्था रहेका कामदारले अहिलेसम्म आफ्नै गोजीको पैसाले खाइरहेको उनीहरूले बताइरहेका छन् । उनीहरू नेपाल भारत सिमानादेखि भारतका विभिन्न स्थानमा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ८, २०७७, १८:००:००
म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो : बजेट भाषणमा हाम्रो व्यवसाय किन समेटिएन् ?
अमेरिकी फौजी कीराको आक्रमणबाट नेपालमा ८० भन्दा बढी प्रजातिका बालीमा हानि
बजेटबारे विज्ञ भन्छन् : कृषि र श्रमका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती
गणतन्त्रसामु मुस्कुराउन नसकेका मजदुर
२७ वर्षको रेमिट्यान्स : उपलब्धिहीन ७० खर्ब
संखुवासभामा पनि भेटिए २ जना कोरोना संक्रमित